China Popular ụdị Fluidized-bed Jet Mill ụlọ ọrụ na-emepụta | Qiangdi
Anyị bụ ndị na-emepụta ihe maka igwe nhazi ntụ.
Nke ka mkpa bụ na anyị na-enye ahaziri imewe nke igwe, nke injinịa, nke akara usoro izute anyị ahịa 'mmepụta chọrọ. Anyị bụ ndị ọrụ ngo soplaya.
Anyị na-enye azịza maka nhazi ntụ ntụ.
Igwe ihe nkpuchi Jet Fluidized-bed bụ n'ezie ngwaọrụ dị otú ahụ nke na-eji ikuku dị elu na-agba ọsọ iji mee ụdị akụrụngwa akọrọ. N'ịbụ nke ikuku na-agbakọ, a na-eme ka ihe ọkụkụ na-agafe na ngagharị nke anọ nozzles ka ọ na-emetụta ma na-egweri site na ikuku na-asọ asọ na mpaghara ebe a na-egweri, nke ike ikuku na ikuku na-emetụta, a ga-ekewapụ ntụ ntụ ruo na wiil na-atụgharị Ihe ndi ahu bu, nke siri ike karie ike; Ngwurugwu ndị dị mma nke na-ezute nha chọrọ ga-abanye na nhazi ọkwa ma banye n'ime nkewa nke cyclone wee kpokọta ya.); ntụ ntụ ndị ọzọ na-agagharị na igwe igwe maka ịmị ọka nhazi ọzọ.
Ihe edeturu:Mwepu ikuku ikuku sitere na 2 m3 / min ruo 40 m3 / min. Production ikike na-adabere kpọmkwem agwa nke gị ihe onwunwe, na ike ga-anwale na anyị ule ụgbọ. Data nke ikike imepụta na fineness ngwaahịa na mpempe akwụkwọ a bụ naanị maka amaokwu gị. Dị iche iche ihe nwere dị iche iche e ji mara, na mgbe ahụ, otu ihe nlereanya nke ugboelu na nkume igwe nri ga-enye dị iche iche mmepụta arụmọrụ maka dị iche iche ihe onwunwe. Biko kpọtụrụ m maka ịkọwapụta ọrụ aka ma ọ bụ ọnwụnwa maka ihe eji enyere gị aka.
Ndi oru oru ngo anyi na aru oru site na otutu ihe nlere ihe nlere nke ihe kariri ihe nlere 1000 sitere na ulo oru ndi ozo, oru ogwu, ulo oru nri na ugbo, ulo oru ndi ozo
Usoro nyocha usoro ngwaahịa-gbanwee ngwaahịa 'fineness dị ka ndị ahịa' chọrọ
Kpọmkwem ịmalite igwe ikuku usoro igwe.
Bido usoro PLC site na njikwa ijikwa okpukpu klaasị, chịkwaa ngwaahịa'fineness.
Na-agbakwunye ihe akụrụngwa na itinye hopper ma ọ bụ igwe nri. Maka igwe nyocha QDF-120, Anyị nwere ike ịnwe ụzọ ikuku site na nrụgide na-adịghị mma iji nye nri ihe; maka igwe mmepụta, nri ogbe ma ọ bụ nri akpa bụ ihe aga-eme iji mejuo mkpa dị iche iche.
Nakọta okokụre ngwaahịa dị ka ndị ahịa 'ụzọ, can nwere ike ozugbo anakọta okokụre ngwaahịa site na bọket, ma ọ bụ jikọọ mbukota igwe.
1 .Ọ dịghị ịrị elu na okpomọkụ: okpomọkụ agaghị abawanye ka a na-akụghasị ihe ndị ahụ n'okpuru ọnọdụ ọrụ nke mgbasa pneumatic na ọnọdụ okpomọkụ na oghere igwe na-adị nkịtị.
2. Enweghị mmetọ: usoro niile enweghị mmetọ dịka ihe ndị ahụ na-ebugharị site na ikuku na ala site na nkukota na mmetụta n'etiti onwe ha na-enweghị itinye mgbasa ozi. Na-egweri onwe ya, yabụ Ngwaọrụ ahụ na-adịgide adịgide na ịdị ọcha nke ngwaahịa dị elu na iche.Grinding dị na sistemụ mechiri emechi, obere uzuzu na mkpọtụ, usoro imepụta ihe na-adịghị mma na gburugburu ebe obibi.
3. Ntachi obi: Ejiri ya na ihe ike nke mohs n'okpuru ọkwa 9, ebe ọ bụ na nsonye na-egwe ọka na-agụnye naanị mmetụta na nkwekọrịta n'etiti ọka kama ijikọta na mgbidi. karịsịa maka ihe ndị nwere nnukwu ike, ịdị ọcha dị elu na uru bara uru.
4. Usoro njikwa usoro mgbatị, oke nkenke, nhọrọ, nkwụsi ike ngwaahịa dị elu.
Nhọrọ mgbawa-àmà imewe, nwekwara ike kwalite nitrogen mgbasa usoro izute àjà ihe ọ ultraụ -ụ-egweri nhazi chọrọ nke flammable na-agbawa agbawa oxide ihe.
5.Nweta urughuru size D50: 1-25μm.Good urughuru udi, warara urughuru size nkesa. Leadingwa na-eduga nkenke nkenke nkenke rotor nke nwere akara ọsọ ruo 80m / s, na-achọpụta oke nkenke maka ihe ndị a chọrọ. Ngwa ụkwụ na-achịkwa onye ntụgharị, enwere ike ịgbanwe nha ntụ. Igwe nkedo a na-ekewaputa ihe na akpaghi aka na ikuku ikuku, enweghi ihe o bula.Ultrafine ntụ ntụ bu ihe kwesiri ntukwasi obi.
6.Contant okpomọkụ ma ọ bụ obere okpomọkụ, na-enweghị free-egweri, karịsịa kwesịrị ekwesị maka ihe nke okpomọkụ enwe mmetụta ọsọ ọsọ, ala agbaze ebe, sugary, obodo agwa.
7.High ike itinye aka na ọnụego, kwalite mmụba ihe, melite arụmọrụ uzuzu.
8.Key akụkụ dị ka ime liner, nkenke wheel na nozulu na-mere nke seramiiki dị ka aluminum oxide, zirconium oxide ma ọ bụ sịlịkọn carbide, huu na-abụghị kọntaktị na metal nile egweri maka elu-adị ọcha nke ikpeazụ.
9.PLC akara usoro, mfe ọrụ.
10.The moto nwere ike jikọọ na belt ntọt ọsọ na-agbaji site na nsogbu nke elu-ọsọ Motors enweghị a maara nke ọma moto ika.
Enwere ike iji ya n'usoro ya na ndị ọkwa klas dị iche iche iji mepụta ngwaahịa nwere ọtụtụ nha n'otu oge.
QDF fluidized bed pneumatic mill nwere ike itipia ihe ndi a puru iche na ihe ndi ozo.
Nnukwu ihe ike: tungsten carbide, carborundum, aluminum oxide, silicon oxide, silicon nitride, wdg.
High-adị ọcha ihe: super-eduzi ihe, pụrụ iche ceramik, wdg
Ihe na-ekpo ọkụ ọkụ: plastik, ọgwụ, toner, ihe ndị ọzọ, wdg.
Ngwaahịa anyị bụ nke a na-ejikarị eme ihe n'okpuru ụlọ ọrụ. Mana anyị anaghị akwụsị ịgbalị ịka mma ma nwekwaa ike ịmụ ndị ahịa ka anyị wee nye ha ọrụ kacha mma na azịza ha
Osote: Pụrụ Iche Nke Fluidized-akwa Jet Mill Na High ekweghị ekwe Materials